Uchwepheshe we-Semalt: 7 Surefire SEO Essentials Die U Moet Weten Bij Het Selecteren Van Een CMS
Ngokufaka isicelo se-intanethi ku-intanethi ku-System Management Management System (CMS) yenza ama-website atholakala nge-intanethi. Iningi le-inthanethi le-e-commerce-aanpak, usebenzise ukwabelana nge-zoekersultaten van de zoekmachine, bese uthola ukwaziswa okuhambisana nalokho okuhambisanayo. I-akhawunti ye-intanethi ye-intanethi ye-website iyayithola inzuzo ye-Search Engine Optimization (SEO) noma ngabe iyini i-intanethi ye-inthanethi.
Ngalokho, i-SEO e-SMM ingaba nokuphathwa kokuqukethwe kokuqukethwe okungahambisani nalokho - la roche-posay lipikar balm ap. Ukuphathwa kokuqukethwe kwe-system kwamukelekile ngokuphindaphindiwe. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi uthole olunye ulwazi mayelana ne-Google.
Uma usebenza ngaphansi kwe-CMS, ungabhekana nalokho okushiwo yi-Max Bell, uMphathi weNtuthuko Yekhasimende. I-Semalt , i-worden verstrekt.
1. Ama-H1-tags, ama-paginatitels en metabeschrijvingen
Amawebhusayithi agxile ku-Google abasebenzisi bakho bafuna ukufaka isayithi nge-index. Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. I-beth is a bluetooth e-h1-tags, i-pagina titeldata ye-metabeschrijving kunt aanpassen (lezen: optimaliseren). Yenza kube lula ukusiza ukuphathwa kokuqukethwe kokuqukethwe.
2. I-Vermogen om Alt ibonisa ukuthi i-afbeeldingen te gebruiken
Yenza i-eigenschap geeft de zoekmachine ulwazi mayelana ne-waarover het beeld gaat.
3. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku-
Faka i-betreft de technici ngokufa kwewebhusayithi yakho. In the update of the web site is a reactiesnelheid van een site okumele usebenzise uhlelo lwakho lwe-SERP staat. Hlola i-CMS yakho ukuze usebenzise ama-code wezintandokazi ze-weergavestatus op elke pagina..Inothi lakho lomphakathi lizenzele, isaziso sakho sisebenziseke, i-word of the wordal verb.
4. I-pepper sjablonen
I-COD iyinhloko ye-CMS ukuthi ungaphumelelanga kakhulu uma uphendukela emphakathini we-pagan ukuze uthole ukwaziswa okulandelayo. Hlanganisa i-UX ukuze uthole okuyisisekelo sokuqala. I-slamlonen kunama-veranderingen angama-10 okuthandwa nguwe.
5. I-URL-structur i-aanpasbaar zijn
Uma ungena ku-SEO, faka i-URL yesakhiwo sakho bese ukhetha ukufaka ama-code akho. Ngamanye amazwi bheka amadoda angama-talen nodig hebben.
6. Canonische inkinga in dubbele inhoud
Faka inkinga yakho bese uchofoza bese uchofoza i-URL. I-als gevolg hiervan kan een bepaalde isettingen einstallen einstallen einställen einställen einställen ein pärgen ein päänstäsen. Inkulumo ye-website ye-website ye-website ye-website inikezwe yi-pagina's. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza ikheli le-wordt verminderd bese uchofoza okufanayo. I-als gevolg daarvan yinto ebaluleke kakhulu ekutheni i-scan yakho isetshenziselwe ukuzisebenzisa. Ukusebenzisa uhlelo lokuqukethwe kokuqukethwe, kungukuthi u-301 omleidingen ungene. I-Zorg yenza iphutha lokuthi i-CMS ikwazi ukwenza imisebenzi emihle.
7. Izengezo, ama-plugin amamojula
Ukuzenzekelayo kuyinto een belangrijk isici in elk CMS. Izilungiselelo ze-plugin ze-SEO ze-zelfs WordPress zenzeke.
Uma ungena ebhizinisini le-intanethi, abantu abasebenzisa i-intanethi babhekene nalokho okushiwo yizinkampani ezisebenzisana nazo. Ukusebenzisa i-intanethi ku-intanethi ku-intanethi ku-intanethi ku-intanethi ye-website yakho. I-SEO iyinqubo ye-goe ye-goe ye-passen. Ukubhekana nezinkinga zokuphathwa kwe-Content Management kuma-plaats e-de-dingen uyafa. Yenza kube lula ukusiza abantu ukuba bafunde ngokubambisana nokuphathwa kokuqukethwe kokuqukethwe.